Wararka Maanta: Isniin, Oct 15, 2019-Xildhibaannada Hirshabeelle oo lagu amray in ay dib ugu soo laabtaan Jowhar
Wararka Maanta- Isniin, Oct 15, 2019
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)-Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ku amray xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle inay dib ugu soo laabtaan magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleedka HIrshabeelle kadib markii uu dhamaaday fasaxii ay ku jireen.
Maalmaha soo socda ayuu sheegay in uu furmi furnayo kulanka Baarlamaanka, si dib loogu anbaqaado howlaha horyaala golaha.
Baarlamaanka Hirshabelle oo lagu waday in uu furmo bishii aynu ka soo gudubnay ayaa dib u dhacyo xoog leh kala kulmay xildhibaanada oo ka maqan caasimada.
Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa fariin uu u direy xildhibaanada ugu sheegay inaysan qaadan doonin gunadooda haddii aysan soo gelin magaalada Jowhar.
Sidoo kale guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxaa uu shacabka ku nool Magaalada Jowhar ka dalbaday in ay la shaqeeyaan ciidamada Amniga si loo sugo Amniga magaalada Jowhar,